အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဟဲ့စားကလောက်တွေ ဒါရန်ကုန်ဟဲ့ နင်တို့ကုလားပြည်ဟုတ်ဘူး
ဟဲ့စားကလောက်တွေ ဒါရန်ကုန်ဟဲ့ နင်တို့ကုလားပြည်ဟုတ်ဘူး
ဒီပုံကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ ၄၈လမ်း ဗလီ မူဆလင်မိဘမဲ့ကျောင်းမီးလောင်မှုမှာပါသွားတဲ့ ကလေး၁၃ယောက် သဂြိုလ်ကြပုံပါ။ အဲဒီကလေးတွေအတွက်ဝမ်းနည်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆူဆိုက်ဗုံးတွေအကြောင်းမမေ့နဲ့။ ပြီးတော့ ကြည့်ပါဦး။ မြန်မာနိုင်ငံလို့တောင် မထင်ရတော့ဖူး။ ကုလားပြည်ကျနေတာပဲ။ ရင်လေးလိုက်တာ အရမ်းပါပဲ။
ဒီပုံကိုပြပြီး ကမ္ဘာကိုလည်းဘာလိမ်ဦးမလဲ မသိဖူး။ သမီးတို့ဖက်ကလည်း မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ဒီပုံပြပြီး ဘယ်လောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ရင်လေးဖို့ကောင်းနေပြီးလည်းဆိုတာ ထောက်ပြရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဦး။
စန္ဒီလည်းလုပ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်နေတာပေါ့နော်။ ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီကြပါဦးနော်။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခေတ်အမြင်နောက်ကျပြီး အယုံလွယ်တတ်ပါတယ်။ သဘောလည်းအရမ်းရိုးကြတော့ ရန်သူရဲ့ Target ကို လုံးဝမမြင်နိုင်ကြပါဖူး။ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ များများလိုနေပါပြီ။ ကုလားရန်က ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့က ဥရောပတို့ အမေရိကတို့မှာ သူတို့လှည့်ကွက်တွေကို သိလာတော့ ၊ အခု အာရှကို ခြေဦးလှည့်နေတာ။ ဂျပန်ကတော့ပြတ်တယ် ။ ဗလီတလုံးမှဆောက်ခွင့်မပေးဖူး။ တောင့်ခံထားတာ။
သမီးကတော့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို မည်ကာမတ်တ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘဝတင်မဟုတ်ပဲ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိ ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြစေချင်တာပါ။ လောကကြီးမှာ ဝဋ်ကြွေးတွေ၊ အပူသောကတွေက များလွန်းလို့လေ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြည်သူအများစုဖက်က ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ပေးလိုက်ရင် နိုင်ငံအနာဂါတ်တော်တော်ကောင်းသွားမယ်
http://burmese.voanews.com/content/us-and-eu-calls-on-the-authorities-to-urgently-conduct-a-through-investigation/1633656.html (သေဆုံးသွားသူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းတာမှအရမ်းပါ။ ဒါပေမဲ့ကြည့်ပါဦး။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားရောက်သွားသလားအောင်းမေ့ရတယ်။ ဒါရန်ကုန်မှဟုတ်ရဲ့လား??? the fire was broke up as accidentally and children died but those people made the false allegation in Rangoon(Yangon). Too bad!I am very sad for our motherland. They had Suicide Bombers everywhere in the world so we have to think very carefully.)